Walaaca heysta Soomaalida Turkiga ku nool | KEYDMEDIA ONLINE
Walaaca heysta Soomaalida Turkiga ku nool
Waxaa maalmihii ugu danbeeyey kordhay walbahaarka ay muujinayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Turkiga, iyadoo albaabadda la isugu dhuftay dhowr xarrumo ganacsi.
ANKARA- Turkey - Dowladda Turkiga ayaa xoojisay cadaadiska ay ku hayaan Soomaalida dalkaasi ka furatay Xarrumaha ganacsi, waxanna ay xireen dhowr goobo ganacsi oo ay Soomaalidu lahaayeen, iyagoo xabsigana u taxaabay milkiillayaasha xarrumahaas.
Ilaa iyo iminka booliska Turkiga ayaa irdaha isugu dhuftay goobo ganacsi oo tiradoodu gaareyso 150 xarumood, halka ay weli xabsiga ku jiraan inta badan ganacsatadii lahayd xarrumahaas.
Booliska Turkiga ayaa sheegay in 10 ka mid ah dadkaasi ganacsatada ah laga masaafurin doono dalkaasi, iyagoo taasina u cuskaday xad gudub dhanka xeerka ganacsiga ah oo dowladdaas u degsanaa.
Dadka muddada badan ku noolaa dalkaas, ayaa tilmaamaya in Soomaalida ay ku xad gudubtay nidaamka ganacsi ee waddanka, taasoo qofka soo galootiga ah ku qasbeysa in ka hor inta uusan furan xarun ganacsi uu oggolaansho ka helo dowladda hoose, waxanna marka laga soo tago canshuurta uu bixinnayo, bud-dhig u ah bilaabashada howshiisa ganacsi inuu shaqaaleysiiyo ugu yaraan 3 ruux oo dalka u dhalatay iyo qof Turki ah oo ay wadaagaan milkiyadda maal gashiga ganacsi, kaasoo ku labbeynaya lahaanshana ganacsigaasi, isla markaana ay si simman ula qeybsanaya faa'iidada.
Ganacsatada Soomaalida ee Turkiga ku sugan ayaa sheegaya in albaabbada ay xirteen madaxda Safaaradda Soomaalida ee dalkaas, kuwaasoo diiday in ay ka jawaabaan marxalad adag ee ay wajahayaan dadkaas Soomaaliyeed ee qaarkood maalmaha badan ku jira jeelasha dalkaasi.
Arrimaha ayaa noqday kuwo kordhiyey walaaca dadka Soomaalida ee dalkaas ku nool, gaar ahaan kuwa ganacsatada ah, kuwaasoo kuu sheegaya in ay ku deg degeen maalgashiga ganacsi ee ay dalkaasi ka sameysteen, iyagoo dowladda Turkiga ka dalbaday in arintooda ay si naxariis leh uga hadasho, maadaama ay yihiin dad qaxooti oo sababo amni u soo maciinsaday dalkaasi.
Xarrumaha ganacsi ee ilaa iyo iminka la xiray ayaa isugu jira, Maqaayado, Carwooyin Dharka lagu iibiyo, goobo timaha lagu jaro iyo kuwa haweenka lagu qurxiyo, kuwaasoo ku yaalla Magaalooyinka Ankara Iyo Istanbul oo ah meelaha ay boolisku ka wadaan howl galka ka dhanka ah ganacsiga Soomaalida.
Soomaali aad u badan ayaa sanadihii ugu danbeeyey magansatay dalka Turkiga, waxana maalinba maalinta ka danbeysa tiro beelaya dadka u safraya dalkaasi, iyadoo qaarkood ay doonayaan in ay wadankaasi deggaan halka qaar kalana ay u tahay marin ay ugu gudbayaan dalalka kale ee Yurub, si ay uga helaan maggan-galyo qaxtootinnimo.
Tan iyo 2011-kii markii ay dalka ku dhufteen abaarro darran, Turkigga ayaa Soomaaliya u ahaa saaxiib dhaw, waxanna uu ka taageeraa arrimo kala duwan oo ay ugu weyn yihiin dib u dhiska ciidamadda, iyagoo Muqdisho ka furatay saldhig ciidan, oo ay sanad kasta ka aflaxaan dufcaddo askar ah, oo ka mid noqonaya Ciidamadda Qalabka Sidda.